नेपालले भारतलाई फेस सेभ गर्ने मौका दिनुपर्छ : भारतीय पत्रकार विशाल अरोरा - Ratopati
नेपालले भारतलाई फेस सेभ गर्ने मौका दिनुपर्छ : भारतीय पत्रकार विशाल अरोरा
भारतीय पत्रकार विशाल अरोराले दुई हप्ता अघि ‘रिप ईण्डियन ईन्फ्लूयन्स ईन नेपाल’ शीर्षकमा नाकाबन्दी बारे एउटा लेख लेखे । त्यो लेखमा पत्रकार अरोराले भारतले नाकाबन्दी गरेर कुटनीतिक रुपमा आत्महत्या गरेको र नेपालमा आफ्ना मित्रहरु गुमाउँदै गएको तर्क गरेका छन् । तर त्यो लेख अचानक उनको र त्यसलाई शेयर गर्नेहरुको फेसबुक पेजबाट एक्कासी हटाइयो । भारत सरकारले नै त्यसो गरेको अनुमान छ । यो लेख लेखेपछि पत्रकार अरोरा केही दिनका लागि काठमाण्डौ आएर रिपोर्टिङ गरेर फर्के । भारतीय म्यागेजिन दी क्याराभानका पूर्व फिचर एडिटर अरोरा अहिले न्यूयोर्क टाईम्स, दि डिप्लोम्याट लगायतका पत्रिकामा स्वतन्त्र पत्रकारका रुपमा लेख्छन् । नेपाल आएका बेला उनीसँग पत्रकार दीपेन्द्र कुँवरले कुराकानी गरेका थिए ।
भारतको नाकावन्दीले गर्दा केही समय यता नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रेको छ, दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै बिग्रन्छ कि अब छिटै समाधान हुन्छ ?
जति बिग्रनु पर्ने हो बिग्रिसकेको छ, । यो भन्दा नराम्रो दिन आउँछ जस्तो लाग्दैन, नराम्रा दिन त अहिले चलिरहेका छन् । नेपालमा आएर मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा मैले भारत विरोधी भावना बढेको पाएँ । नेताहरुले दावी गरेको मात्रै होईन, वास्तवमै नेपालमा मान्छेहरु भारतसँग खुशी छैनन, भारतले जानी जानी नाकाबन्दी गरेको उनीहरुको बुझाई छ । र,सूचकहरुले पनि त्यही देखाउँछ । अब यसको केही समाधान आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कहिलेसम्म होला समाधान ?
मलाई लाग्छ यो नेपालमाथि नै भर पर्छ । भारत आफ्नो ‘पोजिशन’बाट पछि हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् किनकी भारतले मधेशीहरुका मागबारे पहिले ‘डिल’ हुनुपर्छ भनेकोले भारत त्यसलाई पर्खेर बस्नेछ ।
तर नेपालको आन्तरिक समस्यालाई लिएर भारतले नाकाबन्दी गरेकोले यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न भएको हो नि त ? होईन र ? हो, बिलकुल यो नेपालको आन्तरिक समस्या हो भन्ने म मान्छु । तर देशहरुको विदेश नीतिका कयौं पाटा हुन्छन । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भारत र चीनले निकै अर्थ राख्छन र यी दुवै देशका विदेश नीतिका दुई वटा पाटा छन् । पहिलो पाटो अनुसार दुवै देशले नेपाललाई छिमेकी मान्छन र नेपालमा शान्ति होस भन्ने चाहान्छन् । किनकी नेपालमा शान्ति भंग भयो भने असर चीन र भारतमा पनि हुन्छ । यो त राम्रो ‘ईन्ट्रेस्ट’ हो, यसलाई तपाइँ ‘म्यूचुअल ईन्ट्रेस्ट’ भन्न सक्नुहुन्छ । तर यसको अर्को पाटो भारत र चीनबीचको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा हो । नेपाल दुई देशको बीचमा छ र यो नाकाबन्दी त्यो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धासँग पनि केही हदसम्म त्यससँग पनि जोडिएको छ । नेपालमा शान्ति भंग भैरहेको छ भन्ने कुरासँग त यो जोडिएको छ नै । तर नेपालमा शान्ति भंग भएको छ भन्ने कुरासँग अहिले भारतलाई कुनै समस्या छैन, किनकी मधेशीहरु भारतीय मूलका हुन् । त्यसैले मधेशमा भैरहेको आन्दोलनबाट भारतलाई कुनै ‘थ्रेट’ छैन । यदि ‘थ्रेट’ हुन्थ्यो भने भारतले नेपालमा शान्ति कायम होस भनेर पुरै कोशिस गथ्र्यो । भारतले पहिले धेरै पटक यस्ता प्रयत्न गरेको थियो तर अहिले गरेको छैन । किनकी भारत अहिले खुशी छैन । यो नेपालमा थाहा भएकै कुरा हो ।
त्यही त नेपालमा संविधान बनेपछि भारत किन असन्तुष्ट छ ?
संविधान बन्नु राम्रो कुरा हो, तर भारतले मधेशीका माग पनि सम्बोधन हुनुप¥यो भनेकोमा त्यो भएन र भारतले त्यसलाई ‘ईगो’का रुपमा लिएको छ । भारतलाई लाग्यो हाम्रो कुरा मानिएन, हेपियो भन्ने लाग्यो । नेपालमा यस्तो मानिन्छ र मेरा नेपाली पत्रकार साथीहरु पनि के भन्छन भने विगतमा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा भारतसँग सल्लाह गर्ने गरिएको थियो र कैयौं पटक त अनुमति लिइएको थियो । यदि नेपालमा यस्तो दृष्टिकोण र प्रभाव छ भने अहिले एक्कासी नेपालले नमानेको कुरा देखिएको छ, त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि पनि यो ‘ईगो’को विषय भनेको हुनुपर्छ किनकी ‘म प्रधानमन्त्री बनेको बेला नेपालले मेरो कुरा मानेन’ भन्ने मोदीलाई लागेको हुनसक्छ ।
एउटा सार्वभौम मुलुकले संविधान बनाउँदा अर्को मित्र छिमेकीका लागि त्यो ‘ईगो’को विषय हुनुपर्ने कुनै कारण हुन्छ र ?
बिलकुल गलत कुरा हो, तर तपाइँले देखिरहनुभएको छ कि यसको कारण के हो ?
मोदीजीको यो शुरुको वर्ष हो र उहाँलाई विदेश नीतिमा निकै राम्रो मान्छे भनेर ‘ईम्प्रेशन’ बनाइएको थियो । आफ्नो शपथ ग्रहणमा मोदीले दक्षिण एशियाका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बोलाउनु भएको थियो । तपाइँले शुरु देखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ मोदीले सामान्यत विदेश नीतिमा ध्यान दिने र विशेष गरी दक्षिण एशियामा ध्यान दिने बताउनुभएको थियो । यहीँ तपाइँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालले मोदीको कुरा मानेन । भारत नेपालसँग रिसाउनुको यही कारण हो । यसको एउटा पाटो यो पनि हो । तपाइँले भने जस्तै यो हुन हुन्थेन यो गलत कुरा हो । तर जब हामी विदेश नीतिको कुरा गर्छाैं तब दुर्भाग्यवश यो हुनुपर्छ वा हुनुहुन्न भन्ने कुरा हेरिन्न, विदेश नीतिमा आफ्नो देशको स्वार्थ हेर्ने गरिन्छ ।
तपाइँ भन्दै हुनुहुन्छ भारत वा नरेन्द्र मोदीको क्षेत्रीय प्रभुत्व वा स्वार्थका कारण अहिलेको स्थिति आयो ।
सबै कुरा त्यही हो भनेर त म भन्दिनँ । किनकी पुरै विश्व र चीनलाई समेत भारतले के चाहेको हो भन्ने कुरा थाहा छ । तर भारतले त्यो पाएन ।
तपाइँ भन्दिनुस्न भारतले चाहेको के हो ?
नेपालको मधेशका मान्छेहरुको भारतमा पनि प्रभाव छ । उत्तर प्रदेश र विहार जस्ता राज्यमा यहाँका मधेशीहरुको पनि प्रभाव छ र त्यतिबेला त विहारमा चुनावको बेला थियो । त्यसकारण भारत त्यतिबेला विहारका जनता वा यता सीमा क्षेत्रका मान्छेहरुलाई ‘तपाइँहरुको ख्याल गर्छाैं’ भन्न चाहान्थ्यो । तर भारतले त्यसो गर्न सकेन् ।
तपाइँले ख्याल राख्ने कुरा गर्नुभयो अझ प्रष्ट शब्दमा भनिदिनुसन ?
मधेशीहरु यहाँ अहिले भएको सीमाङ्कनबाट सन्तुष्ट छैनन । भारतले ठ्याक्कै यही हुनुहपर्छ भनेर बोलेको त थिएन । तर संघीयताका विषयमा मधेशीहरुलाई पनि सामेल गरी उनीहरुका कुरा सुनियोस र सम्बोधन गरियोस भनेको थियो ।
तर तपाइँलाई लाग्दैन जे दिईएन भनेर भनिएको छ, त्यो धेरै हदसम्म नेपालको संविधानमा छ ? नेपालको दावी त के छ भने नेपालको संविधान भारतको भन्दा अझ प्रगतिशील छ ।
म नेपालको संविधान भारतको संविधान भन्दा प्रगतिशील छ भनेर पुरै सहमत त छैन, तर केही कुरामा भने नेपालको संविधान भारतको भन्दा अवश्य राम्रो छ । केही अधिकार निकै आधुनिक छन, त्यो मान्छु । तर थाहा भएकै कुरा हो निकै हतारोमा संविधान जारी गरियो , त्यसैले यसमा केही समस्या छन भन्ने मलाई लाग्छ । यदि संविधान सभाका सदस्य(सांसद)हरु गम्भीरता पूर्व त्यसलाई अध्ययन गरेर संशोधन गर्न तयार हुन्छन भने त्यो राम्रो हुन्छ ।
संविधान संशोधन नै गर्ने भनिएको छ नि त ।
त्यो निकै राम्रो कुरा हो । यदि उहाँहरु अडानमा हुनुहुन्न भने राम्रो कुरा हो । संविधान बदल्न सकिन्नँ तर त्यसका केही प्रावधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
भारतले चाहेकै कारण छिरिङ तोग्वे जित्नुभयो भनेर त पुरै मान्दिनँ, तोग्वे लोकप्रिय पनि हुनुहुन्थ्यो र जित्नुभयो भन्ने लाग्छ । तर भारतले जिग्मे थिन्ले फेरि ‘पावर’मा आउन् भन्ने नचाहेको कुरा स्पष्ट रुपले दर्शाइदिएको थियो । भारतले अहिले नेपालमा त्यस्तै नै गर्न चाहेको हो जस्तो त लाग्दैन, भारतले नेपाललाई भारतको चाहना नेपालले वेवास्ता गर्न सक्दैन भनेर बोध गराउन चाहिरहेको छ ।
तर फेरि यहाँ नेर कुरा आउँछ भारतीय नाकाबन्दीको । नाकाबन्दी किन ?
विलकुल सही कुरा । नाकाबन्दी हुनुहुन्न । कुनै पनि देशले आफ्नो छिमेकी देशका मान्छेहरुले दुख पाउने काम गर्नुहुँदैन । अझ विशेष गरी औषधि र ईन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तु रोक्ने काम झन गर्नुहुन्न । यो सब भारतले गरेको छ भन्ने यहाँ सबै मान्छन यदि यसमा भारतको हात छ भने ….
तपाइँलाई के लाग्छ यसमा भारतको हात छैन ?
सबै सूचकहरुले यसमा भारतको भूमिका हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ ।
भारतले यस्तो केही वर्ष पहिले भुटानसँग पनि गरेको थियो, जति बेला भुटानमा दोस्रो प्रजातान्त्रिक चुनाव हुँदै थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्ले र विपक्षी नेता छिरिङ तोग्वे प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला भारतले ग्यास सिलिण्डरमा रहेको ‘सब्सिडी’ हटाएको थियो र त्यसले निकै नराम्रो असर पारेपछि भाउ निकै बढेको थियो । त्यसैले अहिले पनि नेपालमा भारतको हात रहेको हुन सक्छ ।
तपाइँले निकै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । त्यतिबेला भारतका कारण छिरिङ तोग्वे जित्नुभयो र अहिले नेपालमा पनि भारत त्यस्तै केही गर्न खोज्दैछ होईन ?
होईन भारतले चाहेकै कारण छिरिङ तोग्वे जित्नुभयो भनेर त पुरै मान्दिनँ, तोग्वे लोकप्रिय पनि हुनुहुन्थ्यो र जित्नुभयो भन्ने लाग्छ । तर भारतले जिग्मे थिन्ले फेरि ‘पावर’मा आउन् भन्ने नचाहेको कुरा स्पष्ट रुपले दर्शाइदिएको थियो । भारतले अहिले नेपालमा त्यस्तै नै गर्न चाहेको हो जस्तो त लाग्दैन, भारतले नेपाललाई भारतको चाहना नेपालले वेवास्ता गर्न सक्दैन भनेर बोध गराउन चाहिरहेको छ ।
तर तपाइँले कुनै अर्को मुलुकको स्वाधीनताको सम्मान गर्नुभयो भने मात्रै न अर्को मुलुकले त्यहाँको नागरिकले तपाइँको स्वाधीनताको सम्मान गर्छ तपाइँको चासोका बारेमा बुझछ नि होईन र ?
बिलकुल ठीक कुरा हो म तपाइको कुरासँग पूर्ण रुपमा सहमत छु । अहिलेको जमाना भनेको ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गर्ने जमान हो, जसमा भारतले पनि निकै लगानी गर्छ । ‘सफ्ट पावर’ भन्नाले मैलै यहाँ अर्काे देशको हेरेर संस्कृति लगायतका कुरा प्रयोग गर्ने भन्न खोजेको हो । र, त्यसका माध्यमबाट सम्बन्ध राम्रो बनाएर आवाज उठाउनु हो नकि कसैको हात बटारेर जबर्जस्ती आफ्नो कुरा मान्न बाध्य पार्नु, यस्तो गर्नुहुन्न । यदि भारतले यस्तो गरेको छ भने यो भारतको गल्ती हो । जुन भारतले गरेको छ ।
तपाइँले अघि भारतले ‘मधेशीको ख्याल गर्छु भनेको थियो’ भन्नुभयो । मधेश र मधेशीको ख्याल गर्ने अनि सिंगो नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्ने यहाँनेरको स्वार्थ के हो ?
मधेशीहरु भारतीय मूलका हुन । उनीहरुको भारतीयसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छ र विश्वास पनि । यदि भारत सीमामा बस्नेहरुको कल्याण चाहान्छ भने त्यो नराम्रो कुरा होईन ।
यदि नियत राम्रो छ भने । अहिले सोंच ठीक छैन,तपाइँको पनि आफ्नो राष्ट्रियता छ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ । तपाइँले आफ्नो राष्ट्रियताको बचाउ गर्नुपर्छ । तर एउटा देशको स्वाधीनता माथि अर्को देशबाट हस्तक्षेप नहोस भन्ने कोणबाट तपाइँलाई सोेधेको ?
नेपालमा रहेका सबैं समूहको संविधानमा सहमति होस भनेर सुझाव दिनु नराम्रो कुरा होईन, सुझाव दिन सकिन्छ । तर सल्लाह सुनिएन भने के गर्ने समस्या त्यहाँनेर हुन्छ । यदि तपाइँले नेपाललाई क्षति पुरयाउन खोज्नुभयो भने त्यो गलत कुरा हो ।
तपाइँलाई लाग्दैन भारतले क्षति पुरयाउन खोज्यो ? एकातिर भारत मधेशीका कुरा गर्छ अनि यस्तोसम्म हुनुपर्छ भनेर सात वटा बुँदा आफ्ना स्वार्थका कुरा पनि चुहाउँछ के । त्यो ‘लिक’ हुने कुरा निकै अचम्मको थियो, पछि विदेशमन्त्रालयले होईन भनेर त्यसलाई खण्डन ग¥यो । तर त्यसबाट भारतले आफ्नो चाहना के हो भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा बताउने कोशिस गरेको थियो भनेर मान्न सकिन्छ ।
तपाइँलाई लाग्छ त्यो ठीक थियो ?
म फेरि पनि भन्छु, अन्तर्राष्टिय समूदायले सुझाव दिन सक्छ, अझ हामी त जोडिएका छौं । कुनै पनि मुलुकले छिमेकमा आफ्नो स्वार्थका बारेमा चासो राख्नु नराम्रो कुरा होइन । सुझाव दिन सकिन्छ । यो ‘ग्लोबल पोलिटिक्स’मा वैधानिक नै मानिन्छ । त्यो कोणबाट भन्न्ने हो भने मलाई कुनै समस्या पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, चाहे भारतका सात वटा बुँदा जे होउन, चाहे ती चौध वा सय बुँदा होउन वा तपाइँ मान्नुस ती हजार बुँदा नै थिए, राख्नु कुनै नराम्रो कुरा होईन, । तर तपाइँले राखेपछि तिनलाइ मानिएन भनेर कसैको हात बटार्नु गलत कुरा हो ।
भारतमा २–४ लाख देखि २९ लाख सम्मका निर्वाचन क्षेत्रहरु छन, ५० वर्ष भारतको निर्वाचन क्षेत्रहरुको पूनर्निर्धारण हुँदैन, विदेशी भनेर सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिइएन् । तर नेपालमा त्यस्तै कुरा हुनुपर्छ भनेर माग राख्न, सुझाव दिन मिल्ला, त्यस्ता नाजायत शर्तहरु सरोकारका विषय हुन सक्लान ? म फेरि पनि त्यही कुरा दोहो¥याउँछु भारतले आफ्ना कुराहरु राख्नु नराम्रो होईन, चाहे भारतले सात बुँदे वा अरु कुनै भनेको होस । गलत कहाँनेर हो भने ती मनाउनका लागि वजनको प्रयोग गरिनु गलत हो म फेरि पनि भन्छु ।
त्यही नमानेर त भारतले नाकाबन्दी गरेको । ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ यो विषय । हो म मान्छु यो विषय ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ, यहाँ मान्छेहरु त्यो मान्छन र सूचकहरुले पनि त्यही देखाउँछन,जस्तो की मैले पहिले नै भनिसकें यो नाकाबन्दीका पछाडि भारत छ ।
तपाइँले लेख्नु पनि भएको छ । मेरो विश्लेषणमा भारत र नाकाबन्दीबारे दुई वटा पाटा छन् । पहिलो शंका यो छ कि भारतले नाकाबन्दीका विषयमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ । दोस्रो भारतले नाकाबन्दीमा निष्क्रिय भूमिका खेलेको छ । निस्क्रिय यस अर्थमा कि भारतले भनिरहेको छ –यो तपाइँहरुको आफ्नो समस्या हो आफै हल गर्नुस हामी यसमा हस्तक्षेप गर्दैनौं । ’ भारतले ‘ईन्टरभेन’ गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । जो भारत प्रष्ट रुपमा गरिरहेको छैन् । अहिले नेपालमा पहिले भारतका विरुद्ध नभएका पार्टीहरु पनि भारतको विरुद्धमा देखिएका छन, मैले खासमा यही कुरामा जोड दिएको थिएँ । नेपालमात्रै होईन विश्वभर धेरै मान्छेहरु छन, जो भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ भनेर बुझिरहेका छन । भारत त्यस्तो बुझाईलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको छैन् । भारतले मात्रै ‘हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौ’ भनेर अस्वीकार मात्रै गरिरहेको छ , तर कुनै रचनात्मक कदम चालेको छैन । यदि तपाइँले मित्रहरु मित्र रहेनन भनेर ‘अलाउ’ गरिदिनु भयो भने त यो भारतका लागि आत्महत्या नै हो ।
यदि कुनै देशले अर्को देशमा परिवर्तन ल्याउन चाहान्छ भने त्यसको माध्यम उसका मित्रहरु नै हुन । ती मित्रहरु नेपालका विरोधी होईनन, तर केही चिजमा भारतले चाहे जस्तो उनीहरु पनि चाहान्छन । त्यही भएर उनीहरु आन्दोलन गर्छन, परिवर्तन ल्याउने प्रयास पनि गर्छन र उनीहरु त्यसमा सफल पनि हुन सक्छन । यदि अहिले भारतले ‘सफ्ट’उपायबाट नेपालमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर चाहने हो भनेपनि अहिले उसँग नेपालमा मित्रहरु नै छैनन् ।
भारतको नियतमा खोट थिएन भने तपाइँको लेख नै किन ‘सेन्सर’ गरियो होला त ? कानूनी रुपमै त्यो ‘सेन्सर’ थियो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ । तर मेरो ‘प्रोफेसनल पेज’बाट र त्यो शेयर गरेका सयौं मान्छेको पेजबाट एका एक गायब गरियो । पोष्ट गर्न खोज्दा पनि नहुने बनाइयो । यसबाट त्यसमा फेसबुकले सेन्सर गरेको हो भन्ने लाग्छ । तर किन गरियो ? थाहा भएन । यसका दुई कारण हुन सक्छन । पहिलो, केही मान्छेहरुले मेरो पोष्टका बारेमा उजुरी गरेका हुन सक्छन । या त भारत सरकार र फेसबुकका बीचमा केही सम्झौता भएको हुन सक्छ र त्यस्ता लेख हटाउन सक्ने भनेर मेरो लेख पनि हटाइएको कुन सक्छ ।
तर त्यो नेपालकै विषयमा लेखिएको लेख नै किन ? तपाइँलाई के लाग्छ के कारणले हटाइएको होला ? त्यो सरकारले गरेको होला ? सामान्य नागरिक वा दबाब समूहको उजुरीका कारण ?
सामान्य नागरिकका कारणले त हुँदै होईन । मलाई लाग्छ भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताका कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।
तपाइँले भारतले गरेको नाकाबन्दी ठीक नभएको र त्यो भारतकै लागि पनि आत्महत्या जस्तै भएको कुरा लेख्नु र त्यही लेख प्रतिबन्धमा पर्नुले भारतको सोंच ठीक थिएन भनेर प्रष्ट बुझन सकिने भयो त होईन र ?
सबै सूचकहरु नाकाबन्दीमा भारतको भूमिका छ भनेर बताउँछन्, दुई प्रकारकै भूमिका निस्क्रिय र सक्रिय दुवै । निस्क्रिय भूमिका रहेको कुरा भन्न कुनै समस्या छैन, हो भारतले गरेकै छ ।
अब भारत के गर्छ होला कि ?
अब भारतले आफ्नो पुरानै विदेश नीति अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
त्यो भनेको के हो ? भारतले आफ्ना मित्रहरुका माध्यमबाट नेपालमा आफ्ना धेरै स्वार्थहरु कायम गरेको छ । नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरु भारतका मित्रका रुपमा पहिले देखि नै छन, । तिनैका माध्यमबाट भारतले नेपालमा आफ्ना स्वार्थहरु कायम गरेको हो र अब पनि भारतले पर्दा पछाडिबाट त्यस्तो काम गराउने प्रयास गर्नेछ । मलाई के लाग्छ भने अहिले भारतका मित्रहरु नै कम भएकोले त्यस्तो गर्न गाह्रो छ । तर भारतले त्यही प्रयत्न गर्नेछ ।
तपाइँ भारतका मित्रहरु अहिले नेपालमा थोरै भन्नुहुन्छ, तर त्यही ‘सेन्सर’मा परेको लेखमा तपाइँले जो जो ले भारतलाई चीनको बराबरीमा राखेर सन्तुलन कायम गर्न खोजे ती सबै समाप्त भए भनेर लेख्नुभएको छ,राजा र प्रचण्डको समेत नाम लिएर । नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा व्यक्ति जसले भारतलाई चीनसँग ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गर्ने कोशिस गरे ती सबै गद्दीबाट हट्नु प¥यो । यो कुनै संयोग मात्रै होईन, त्यो भारतले आफ्ना मित्र हरुबाट गराएको हो । यो नेपालका लागि सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
अब त्यो खेलको संभावना कतिको छ अब , भलै तपाइँले मित्रहरु थोरै छन भनेर भन्नुभएको छ । नेपालमा भारतले आफ्ना स्वार्थहरु निकै राम्रो ढंगले हासिल गरेको छ । भारतले आफू नेपालमा चीन भन्दा बढी प्रभावकारी छु भन्ने ‘प्रि एमिनेन्स’ कायम गरेको छ । चीन भन्दा भारत नेपालमा प्रभावकारी छ भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
अब ती ‘एक्टर’हरु को हुन सक्लान नेपालमा ?
यही त मेरो प्रश्न हो । अब यहाँ भारतका मित्रहरु को छन ? भारतले व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी छ । किन मान्छेहरुले दुख पाउने ? पेट्रोल छैन, ग्यास छैन, औषधि छैन त्यो पनि यति ठूलो भूकम्पबाट नेपाल उठ्ने कोशिस गरिरहेको बेला ।
के भयो भने भारत नेपाल सम्बन्ध राम्रो होला ? अहिले भन्दा भारतले तत्काल नाकाबन्दी हटाउनु पर्छ सिधा कुरा । यहाँनेर उसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि उल्लंघन गरेको छ । भारतको सम्बन्ध त नेपालसँग मात्रै बिग्रेको होईन नि त । हो म मान्छु भुटानलाई छोडेर भारतले ढुक्कसँग दक्षिण एशियामा भन्न सक्दैन ‘हामी मित्र हौं ’ । पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका बारेमा त दुनियाँलाई थाहै छ । कयौं देशमा सरकार बन्ने बेलामा भारतसँग उसको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरामा समेत निर्भर गर्छ ।
मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा भारतको चासो प्राकृतिक स्रोतमा आंशिक रुपले हुन सक्छ, तर मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन् । किनकी अहिलेको खास कुरा नेपालले भारतको कुरा मानेन भन्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले ‘ईगो ईश्यू ’ समस्यानै हो ।
भारतीय शासक वर्गले त्यस्ता व्यवहार सच्याउनुपर्छ भन्ने त तपाइँलाई पनि लाग्दो होला नि होईन ? हो, एक देशमाथि अर्को देशको विश्वास हुनु निकै जरुरी छ । एक अर्काप्रति राम्रो प्रभाव हुनुपर्छ । म दक्षिण एशियामा धेरै घुम्छु, तर दक्षिण एशियामा भारतको प्रतिष्ठा राम्रो छैन । उनीहरु भारतलाई राम्रो मान्दैनन । मान्छेहरु भारत राम्रो देश र राम्रो छिमेकी हो भन्ने मान्दैनन् ।
फेरि पनि यहाँनेर भारतको चाहना अहिले नेपालमा के हो ? बुझ्न नसकिएको कुरा । भारतका दुई वटा चाहाना छन, एउटा नेपालमा शान्ति र अर्को चीनसँगको प्रतिस्पर्धा । आफ्नो भन्दा चीनको प्रभाव नेपालमा बढी होस भन्ने भारत चाहान्न । अहिले नेपालले भारतको कुरा मानेन, यसले भारत नेपालमा आफ्नो प्रभाव गुमाईरहेको छ भन्ने दर्शाउँछ । यो एउटा कुरा भयो । दोस्रो, मधेशी मुद्दाको प्रभाव भारतको राजनीतिमा पनि पर्छ। र, त्यतिबेला त विहारमा चुनावको बेला थियो ।
तपाइँलाई के लाग्छ भारतले अब के गर्नुपर्छ ?
अब भारतले नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई एकै ठाउँ ल्याउने र समस्याको समाधान गर्ने काम गर्नुपर्छ । भारतले एउटा गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्छ ताकि मधेशमा प्रदर्शन कम होस । भारतको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा धेरै छ, त्यसैले भारतले धेरै कुरा गर्न सक्छ । यस्ता धेरै राजनीतिक शक्तिहरु छन,जो भारतलाई राम्रो मान्छन र भारतले भनेको पनि मान्छन् । भारतले पहिले नै यस्तो खालको रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर गरेन । भारतलाई नेपालमा संविधान बन्दैछ भन्ने कुरा थाहा नभएको होईन । संविधान जारी नहुँदै भारतले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो र भन्न सक्नुपथ्र्याे मधेशीका माग यस्ता छन । अनि तीन प्रमुख पार्टीको चाहना के हो र समाधान के हो ? भनेर छलफल गर्न सक्नुपथ्र्यो । यदि संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले यसरी छलफल गर्न सकेको भए हामीले यो नाकाबन्दी देख्नु पर्ने थिएन् । र, नाकाबन्दीमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको हात छैन म भन्दिनँ । उनीहरु पनि जिम्मेवार छन् । मधेशी दलले प्रदर्शनको आयोजना गरेका छन र मान्छेहरु स्वतस्फूर्त रुपमा पनि प्रदर्शनमा छन् । त्यो कुरालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । समस्या छ त्यसैले नेपाल र भारत दुवैले प्रयत्न गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ दुवै देशलाई दोष लगाउन सकिन्छ , तर धेरै दोष भारतको छ किनभने भारत छुट्टै देश हो ।
नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता चाहेको छैन भनिएको छ र कहिँ न कहिँ त्यो देखिन्छ पनि र यहाँ आम बुझाई पनि छ ,एउटा कुरा । दोस्रो नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि भारतको स्वार्थ छ , त्यसैले मधेशको कुरा गरेर भारत त्यो स्वार्थ हेरिरहेको छ र भारत नेपाललाई सिक्किम वा भुटान जस्तै बनाउन खोजेको हो भन्ने शंकाहरु पनि छन । शंकाहरुलाई भारतले निवारण गर्न सक्छ ? । के यी शंका मात्रै होलान त ? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको राजनीतिक संगठन मानिन्छ र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ भारतलाई पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहान्छ । त्यसैले नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनु उसका लागि गर्वको विषय हो । तर त्यो हुन सकेन, राजतन्त्रसँग हिन्दु राष्ट्रको पनि पतन भयो । भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीले नेपाल हिन्दु राष्ट्र होस भन्ने चाहानु स्वाभाविक कुरा हो । जस्तो की अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ – बाई केरियस प्लेजर । अर्थात मलाई त मिलेन तर अरु कसैलाई त्यस्तो देखेर मलाई खुशी हुनेछ भने जस्तो ।
दोस्रो सिक्किमीकरण कुरा । त्यो मलाई चाहिँ ‘कन्स्पीरेसी थ्योरी ’ मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ । मलाई लाग्छ अहिलेको विश्व राजनीतिमा त्यो संभव छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र समुदाय अहिले नै निकै बलिया छन् । त्यसैले यो ‘कन्स्पीरेसी थ्योरी’ मात्रै हो । त्यसैले भारतले मधेशमा कब्जा गर्ने कुरा संभव छैन, भारतले पनि यो सोंच्नुहुन्न र तपाइँहरुले पनि सोंच्नुहुन्न ।
म मान्छु भारतले नेपाल पनि भुटान जस्तो बनोस भन्ने चाहान्छ । भुटान जस्तो बनाउने कुरा अरु देशमा त संभव छैन, तर भारत नेपालमा त्यस्तो महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ । तर व्यवहारिक कारणले त्यो संभव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भुटान र नेपाल लगायत अरु देशको स्थिति अलि फरक छ । भूटानले आफै पनि भारतसँग त्यस्तो सम्बन्ध चाहेर भएको हो ।
र, मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा भारतको चासो प्राकृतिक स्रोतमा आंशिक रुपले हुन सक्छ, तर मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन् । किनकी अहिलेको खास कुरा नेपालले भारतको कुरा मानेन भन्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले ‘ईगो ईश्यू ’ समस्यानै हो ।
बुझन नसकेको कुरा त्यो ‘ईगो ईश्यू ’ के हो ? मैले भने नि भारतले भनेको कुनै ‘एक्स वाई जेड’ कुनै कुरा मानेन नेपालले । भारतले कुनै महत्वपूर्ण बेला कुनै कुरा भन्यो त्यो नेपालले मानेन ।
तपाइँलाई थाहा छ त्यो कुरा ? यहाँ कुरा के थियो भन्ने होईन, नेपालले मानेन भन्ने हो । तपाइँ यो मान्नुस कि चीन खुशी भयो ।
यही कुरा भारतले संविधानको स्वागत गरेर पनि त राख्न सक्थ्यो होईन र ? तर संविधान बनेपछि भारतले भनेको कुरा मानिएन भन्ने प्रष्ट भएको थियो नि त । त्यसैले त्यहाँ ‘ईगो हर्ट’ भयो र भारतले संविधान ‘नोटेड’ भन्यो ।
गलत ‘ईगा’े थियो त्यो ।
‘ईगो ईश्यूज’ गलत नै हुन्छन । तपाइँले दिल होईन दिमागले सोंच्नुपर्छ । भारतले अहिले त दिमागबाट होईन दिलबाट सोंच्यो । दिलले सोंच्नु पर्ने कुरा दिमाग र दिमागले सोंच्नुपर्ने कुरा दिलले सोंच्यो । अहिले भारतले यहाँ उल्टो गरिरहेको छ । दिलको प्रयोग तपाइँले त्यतिबेला गर्नुपर्छ जतिबेला मान्छेहरुले दुख पाईरहेका छन ।
जो अहिले भैरहेको छ । हो अहिले यहाँ त्यस्तो छ । औषधि छैन, ग्यास छैन् । यतिबेला दिलको प्रयोग गर्नुपर्छ । जतिबेला तपाइँले भनेको कसैले मानेन भने के गर्ने भनेर त्यतिबेला दिमागको प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतले उल्टो ग¥यो दिलबाट ‘ईगो ईश्यू’अनि दिमागबाट नाकाबन्दीलाई मात्रै हेर्यो ।
अब भारतले त्यो ‘ईगो’ छोड्नुपर्छ होईन र ?
छोड्नुपर्छ । तर म साँच्चै व्यवहारिक कुरा भन्छु । नेपालले भारतलाई ‘फेस सेभ’गर्ने मौका दिनुपर्छ । नाकाबन्दी समेत असफल भयो भनेर नेपालले भारतलाई सन्देश दिनुहुन्न । ‘फेस सेभ’गर्न दिनुपर्छ । भारतको ‘फेस सेभ’ मधेश मुद्दाको समाधान भयो भने मात्रै हुन्छ । तब भारतले ‘हामीले त यही चाहेका थियौ ,तपाइँ आफै मिलेर समाधान गर्नुुस । मिलेर बस्नुस भन्नेछ ।’ त्यसपछि सबै ठीक । खासमा अहिलेका लागि ‘विन विन’ अवस्था यही नै हो ।
यदि त्यसो भएन भने के हुन्छ ?
त्यसो नभए भारत र नेपाल दुवै देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्नेछ । किनकी दुःख पाउने त मान्छेले हो नि । र, त्यो दबाब दिनु पनि पर्छ ।
भारतमा यसबारे के छ ?
भारतमा पनि निकै चासो छ । भारतीय पत्रपत्रिकाले समाचार लेखिरहेका छन, भारतमा सत्तारुढ गठबन्धन बाहेक सबैले भारत नेपालमा अहिले गल्ती गरिरहेको छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
नेपाल पनि खुशी रहने भारत पनि खुशी रहने उपाय के होला ? किनभने अहिलेसम्म त भारतको भूमिका ठूल्दाईको जस्तो छ ।
भारतले समय फेरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न्पर्छ । नेपाल पहिले संक्रमणकाल थियो तर संविधान आएपछि राष्ट्रिय भावना, सार्वभौमिकताको चेत पहिले भन्दा बढेको छ, नेपालीहरु अहिले आफूलाई एकतरिकाले व्यवस्थित महशुस गरिरहेका छन् । भारतले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अनि आफ्नो महत्वांकाक्षा घटाउनु पर्छ र सम्पूर्ण रुपले कुटनीतिक ढंगले काम गर्नुपर्छ ताकि पुरै विश्वलाई फाईदा होस ।
यहाँ चीनको पनि कुरा कुरा आउँछ । उनीहरुको रणनीति ‘स्ट्रिङ आफ पल्र्स’ यसमा भारतको स्वाभाविक चासो छ, भारतको प्रधानमन्त्री जो सुकै होस । किन चीन भारतलाई कुटनीतिक रुपले घेराबन्दी गरिरहेको छ ? भन्ने भारतको स्वाभाविक चासो हो । त्यसैले भारत–चीन अनि भारत –पाकिस्तान समबन्ध राम्रो नहुँदासम्म अफ्ठेरो हुन्छ ।
म नेपाललाइ माया गर्छु । यहाँ आउँदा मलाई आफुनो देशमै आए जस्तो लाग्छ । म स्वतन्त्र पत्रकार हुँ म सरकारको मान्छे होइन, म मलाई लागेको कुरा बोल्छु ,लेख्छु । नेपालले प्रगति गरोस, नेपाली सुखी होउन । म यही चाहान्छ ।
भारतले पनि हस्तक्षेप नगरोस हाम्रो सम्बन्ध राम्रो होस हाम्रो चाहाना ।
हो भारतले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । हस्तक्षेप गलत कुरा हो । धन्यवाद ।